မြစ်ဆုံ: ဘ၀ပန်းတိုင် နှင်. ရည်မှန်းချက်
ဘာထရန်ရတ်ဆယ်နှင်. လီယိုတော်စတွိုင်ကဲ.သို.သော ခေတ်သစ်တွေးခေါ်ရှင်ကြီးများကပင်လျှင် အဖြေရှာမရကြောင်းဝန်ခံကြရသည်။
လူသည် ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အသိဥာဏ်အမြင်.ဆုံးနှင်. ဆင်ခြင်တွေးခေါ်တတ်သော သတ္တ၀ါဖြစ်သည်။ အဆင်.ဆင်. တိုးတက်ပြောင်းလဲ မှုဖြစ်စဉ်ဟူသောသစ်ပင်ပေါ်တွင် အမြင်.ဆုံးနေရာကိုယူထားသူလည်းဖြစ်သည်။ ထို.ကြောင်. လူသားတစ်ဦးတည်းကသာ လျှင်သဘာဝ၌ ရှိသော သူ၏ အနေအထားကို သိမြင်ပြီး သူ.ဘ၀၏ အဓိပ္ပယ်နှင်. ရည်မှန်းချက်တို.ကို သိနားလည်ဖို.ရှိသည်။
မြို.တွင်း၌ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ ခြေဦးတည်.ရာ လျှောက်သွားနေလျှင် မည်သည်.အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှ ရရှိမည်မဟုတ်ချေ။ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မရှိဘဲဘ၀ခရီးကိုနှင်သူသည် ပင်လယ်ပြင်ကျယ်တွင်လှေငယ်ပေါ်ထိုင်နေသည်.အရပ်မျက်နှာအမှတ်အသားအားလုံးပျောက်ဆုံးပြီး မည်သည်.အရပ်ကို လှော်ရမှန်းမသိသောသူနှင်.တူနေလိမ်.မည်။
ဘ၀ပြဿနာက အလွန်အမင်းခက်ခဲသည်ဟု ထင်ရသောအခါ လူများစွာတို.သည် မိမိတို.၏ဘ၀ကံကြမ္မာအကြောင်းနှင်.ထိုက်တန်ကောင်းမွန်သည်. ဘ၀ရည်မှန်းချက်တစ်ခုချမှတ်ရေးအကြောင်း
နှင်.ထိုက်တန်ကောင်းမွန်သည်.ဘ၀ရည်မှန်းချက်တစ်ခုချမှတ်ရေးအကြောင်းတို.ကို စိတ်ရှုပ်ခံ၍ မစဉ်းစားကြတော.ချေ။ လူတို.၏ အာရုံကို အများဆုံး ဆွဲဆောင်သောလက်ငင်းပြဿနာများကိုသာအလေးထားကြတော.သည်။
လူပီသသောသူသည်မိမိဘ၀အကြောင်းကိုအလေးအနက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးလျှင် အကောင်းဆုံးပန်တိုင်နှင်.ဘ၀လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုချမှတ်ရမည်။ဤသို.မချမှတ်နိုင်လျှင်သူသည် ဘ၀၏အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ.မှုကြောင်. စိတ်ပျက်ပူဆွေးမှုနှင်. လွှမ်းမိုးဝါးမျိုခြင်းကိုခံရလိမ်.မည်။
ကျွန်ုပ်တို.၏ နေထိုင်ပုံသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးများနှင်. လူ.အဖွဲ.အစည်းအတွက် ကောင်းကျိုးများကို
ဖြစ်ထွန်းစေသင်.သည်။ အချိန်တို စီစဉ်မှုများအပြင် ဘ၀တစ်သက်တာပတ်လုံး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမည်.မြင်.မြတ်သော ဘ၀ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို.ချမှတ်သင်.ကြသည်။
ဒေါက်တာ မင်းတင်မွန်၏ THE PURPOSE AND THE GOAL OF LIFT (ဘ၀ကိစ္စ နှင်. ဘ၀ပန်းတိုင် ) စာအုပ်မှ ပြန်လည်ကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
စာအုပ်စာပေလူ့ မိတ်ဆွေတဲ့ ...မြစ်ဆုံရေ...အဝေးကိုရောက်တဲ့ အချိန်မှာစာပေဟာတကယ်ကိုအမအတွက်မိတ်ဆွေအစစ်ပါပဲ....ကျေးဇူးတင်တယ်နော်..